Press Press Hydraulika, Press Press Hydraulika, Press Press Deep - Zhengxi
Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa, toy ny milina fanodinana hydraulic, presses hydraulic hydraulic [...]Hamaky bebe kokoa
Mifantoka amin'ny fitaovana hydraulic fitaovana mandeha ho azy peripheral sy atrikasa tsy mitantana.Hamaky bebe kokoa
Mifantoka amin'ny serivisy aorian'ny varotra Manohana ny famatsiana kojakoja fanampiny. Ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa [...]Hamaky bebe kokoa
Chengdu Zhengxi Hydraulika
Izy io dia nitazona fiaraha-miasa akaiky amin'ireo oniversite any an-toerana malaza sy oniversite fikarohana nandritra ny fotoana ela ary nanolo-tena ho mpisava lalana teknolojia amin'ny indostrian'ny milina hydraulic.
IZAHAY DIA MANERAN-TANY
Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa, toy ny milina fanodinana hidy, paompy fanodinana hydraulic, paompy fananganana vovo, famokarana milina fanodinana hydraulic, ary fanitsiana paompy hydraulic, dia noraisin'ireo mpanjifa anatiny sy avy any ivelany tsara.
Hydraulic Compte SMC BMC ...
4 andalana lalina lalina hydra ...
Magnetic Ferrite mandeha ho azy ...
Famokarana SMC mandeha ho azy Li ...
Ny haben'ny zavamaniry
Zavamaniry 1: 9000SQM Zavamaniry 2: 48000SQM
Olona manodidina ny 150 eo ho eo
Maherin'ny seta 60
Ny sandan'ny milina famoahana amin'ny 2017
Inona Izahay dia manao
Ny fizotry ny milina lehibe indrindra sy feno ao amin'ny faritanin'i Sichuan
Chengdu Zhengxi Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny faritra fivarotana Qingbaijiang Free Trade Zone of Chengdu. Ny orinasa dia mandrakotra velarantany 45608 metatra toradroa, ao anatin'izany ny velaran'ny atrikasa mavesatra 30.400 metatra toradroa. Izy io dia mpamokatra matihanina amin'ny milina fanodinana hydraulic any Shina. Ny orinasa dia manana injeniera sy teknisianina maherin'ny 100 ary patanty famoronana nasionaly am-polony. Izy io dia nitazona fiaraha-miasa akaiky amin'ireo oniversite any an-toerana malaza sy oniversite fikarohana nandritra ny fotoana ela ary nanolo-tena ho mpisava lalana teknolojia amin'ny indostrian'ny milina hydraulic.
Mba hahafahana manompo bebe kokoa ny mpanjifa, Zhengxi Group dia nanangana sampana roa ihany koa: Chengdu Zhengxi Robotics Co., Ltd.-mifantoka amin'ny fitaovana hydraulic peripheral automatique fitaovana sy atrikasa tsy mitantana; Chengdu Zhengxi Smart Technology Co., Ltd.-mifantoka amin'ny serivisy aorian'ny varotra Manohana ny famatsiana kojakoja fanampiny. Ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa dia manao ezaka tsy tapaka ho an'ny "Zhengxi" mba ho lasa marika malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena!
Ny orinasanay dia manatsara ny fampiasana fenitra nasionaly sy indostria, mifehy fatratra ny dingana tsirairay, manome antoka ny kalitaon'ny singa tsirairay. Aorian'ny fanodinana ireo fitaovana ho an'ny mpanjifanay, dia hanao fanadihadiana feno momba ny fahombiazan'ny fitaovanay izahay avy eo hanatsara ny teknolojia sy ny kalitaonay. Nahazo ny mari-pahaizana ISO9001: 2008 sy CE ihany koa izahay. Ny orinasa no lehibe indrindra ary miaraka amin'ny fizotran'ny milina feno ao amin'ny faritanin'i Sichuan.